दलहरुले भनेजस्तो सजिलै प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले पद स्वीकार नगरेपछि नयाँ सरकार भने बन्न सकेको छैन । यद्यपी प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने प्रस्तावले पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका दलहरुलाई भने नजिकै ल्याइदिएको छ ।
केही दलको विरोधका बाबजुत बाँकी दलले मान्ने गरि आएको यो प्रस्तावको शुत्रधार को थियो ? अहिलेसम्म कसैले मुख खोलेको छैन । यसका सुत्रधारका रुपमा कसैले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको नाम लिइरहेका छन् त कसैले यसको जस एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएका छन् ।
केही समयअघिसम्म सत्तामोहको आरोप लागेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नयाँ सरकार गठनमा भने निकै सक्रिय देखिनुभएको छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग उज्यालो अनलाइनका लागि माधव दुलालले गरेको कुराकानीः
चुनावी मन्त्रीपरिषद प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा बन्ने निश्चित भएको हो ?
सबै प्रमुख दलहरु आगामी जेठमा निवार्चन सम्पन्न गर्नको निम्ति वहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सर्वसम्मत निष्कर्षमा पुगेका छन् । यो खुसीको कुरा हो । त्यसै अनुरुप नै संवैधानिक कानूनी प्रकृयाहरुलाई पुरा गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल जारी छ ।
राष्ट्रपति यादव र तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड यो प्रस्तावको शूत्रधार हुनुहुन्छ भनिन्छ नि ?
यो अड्कलबाजीमात्र हो ।
प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निष्कर्षमा कसरी पुग्नुभयो ?
सर्वस्वीकृत लोकतान्त्रिक मान्यता भनेको व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित सरकारले नै अर्को निर्वाचन गराउँछ । संसारभरीको मान्यता यही हो । तर हामीकहाँ काँग्रेस एमाललेले त्यो कुरा स्वीकार गरेनन् । बलजफ्ती हठ गरेर ९ महिनासम्म उनीहरु त्यसका बिरुद्ध उभिए । यो अवस्थामा हामीले अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो । त्यो अवस्थामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्ति खोज्ने निर्वाचन गर्ने निकायको खोजी गर्दै जाँदा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नै संसारभरीको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरुप सबैभन्दा स्वतन्त्र निष्पक्ष मानिन्छ । त्यसैले उहाँको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु सही हुन्छ भन्ने निचोडमा हामी पुगेको हो । यो कसैको दिमागबाट अकस्मात आएको वा जालसाजी तरिकाले अघि सारेको भन्ने अड्कालबाजीमा लाग्नु आवश्यक छैन ।
पहिला नै प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गरेर उहाँले स्वीकारेपछि छलफल थाल्नुभयो कि पहिला दलहरुबीच छलफल गरुँ, मानिहाल्नुहुन्छ नी भनेर ?
सामान्य अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने कुरा आउँदैन । तर विशिष्ट अवस्थामा विशिष्ठ समाधान खोज्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा अर्को निर्वाचनको व्यवस्था पनि थिएन र अहिलेको जस्तो जटिल अवस्थाको परिकल्पना गरिएको पनि थिएन । त्यसैले अहिले अपवादस्वरुप हामीले यो प्रकृयामा जाने सोंच बनाएका हौँ । यसक्रममा हामी सबै जिम्मेवारपूर्ण ढंगले नै प्रस्तुत हुनुपर्छ । र, हामीले छलफल गरेर आमसहमति जुटाएर अघि बढ्ने कोसिस गर्दैछौँ ।
यसमा पहिलो कुरा राजनीतिक रुपमा सबैको प्रतिवद्धता हुन पर्‍यो । दोश्रो कुरा संवैधानिक कानूनको विशिष्ट व्यवस्था भएकोले यो विशिष्ट व्यवस्थालाई पनि आम सहमति बनाएर विवाद रहित ढंगले अगाढी बढाउनुपर्‍यो । यि दुईवटा विषयमा नै सबै छलफलहरु केन्द्रीत छन् ।
जसलाई चुनावी मन्त्रीपरिषदको नेतृत्व सुम्पिन लाग्नुभएको छ उहाँबाट नै अन्तरिम संविधानमा नै नभएको व्यवस्था मैले कसरी मान्ने भन्नुभयो रे नी, हैन ?
अन्तरिम संविधानमा त अर्को चुनावको परिकल्पना नै गरिएको छैन । हामीले गर्ने त सबै विशेष व्यवस्था नै हो । संवैधानिक कानूनी अड्चन फुकाउनको निम्ति संविधानको धारा १५८ को वाधा अड्काउन फुकाउ आदेशको प्रावधान छ, त्यसैको प्रयोग गरेर नै हामीले निकाश खोज्नुपर्छ । त्यसैले कसैले बोल्ने नबोल्ने भन्ने कुरा प्रमुख होइन । आमसहमतिले नै वाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्नुपर्ने भएकोले हामीले राजनीतिक दलहरु, सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश लगायत सबैसँग समझदारी बनाएर नै प्रकृया अघि बढाएका छौँ । सरकार प्रमुख र संयोगले कानूनमन्त्री पनि हुनुको नाताले मैले नै समग्र प्रकृयामा संयोजन गर्नुपर्ने मेरो दायित्व निभाइरहेको छु ।
प्रधानन्यायाधीशले केही शर्त राख्नुभएको छ र ति शर्त राजनीतिक दलहरुले पुरा गर्न सक्दैनन् भन्ने पनि आएको छ नी ?
कवि भूपि शेरचनले कवितामा हल्लैहल्लाको देश भनेर व्यंग्य गरेका थिए । यस्तो हल्लामा हामी जान हुँदैन । सबै गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बेलामा कसकसले केके शर्त राख्यो भनेर अनावश्यक आशंका र हल्ला गर्नुको अर्थ छैन । राजनीतिक रुपमा अब सहमति बनिसक्यो । केही समयअघिसम्म राजनीतिक दलहरुबीचमा नै एकरुपता थिएन र अवस्था असहज पनि थियो । तर यतिबेला राजनीतिक दलहरुबीच एकरुपता छ । अब संवैधानिक र कानूनी रुपमा यसलाई विवाद रहित कसरी बनाउने भन्नेमा मात्र हाम्रो छलफल जारी छ । हामी संविधानविद, कानूनविदसँग राय सल्लाह गरेर निकाश खोज्दैछौँ । त्यसैले यसले उसलाई शर्त थोप¥यो भन्ने कुरामा कै सत्यता छैन ।
अन्य राजनीतिक दलहरुलाई त छलफलमा सहभागी नै गराउनुभएको छैन । चारदलीय सिन्डिकेट भयो । चारदलीय निरंकुशता हावी भयो भनिरहेका छन् उनीहरु ।
केही साना दलहरुको ‘रिजर्भेसन’ छ । वहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थामा आफ्ना विचारहरु राख्न पाइन्छ । तर अन्ततः हामीलाई के विश्वास छ भने, अहिले भएका चार राजनीतिक पक्षले नै संविधानसभाको निर्वाचनमा वहुसंख्यक जनताको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । अर्को निर्वाचन नभएसम्म उनीहरुले पाएको जनमतलाई नै हामीले आधार बनाउनुपर्छ । केही साना दलहरु पनि यो निकासप्रति सहमत छन् । यति हुँदाहुँदै पनि कसैले असहमति राख्छ भने पनि यो प्रकृया रोकिन्न ।
कहिलेसम्म सहमतिले मूर्त रुप पाउला ? कहिलेसम्म चुनावी प्रधानन्याधीशलाई नेतृत्व सुम्पिनुहुन्छ ?
म त निकै आतुर छु । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि ९० दिन चाहिन्छ भनेको छ । त्यसैले केहीदिनभित्रमा निकास निकालेर सहमतिलाई मूर्त रुप दिने अनि निर्वाचनको तयारीमा लाग्नेछौ । दलहरुबीचको सहमतिलाई सबैले साथ सहयोग दिनेछन् र पूर्वाग्रह नराखी सहयोग गर्न म सबैलाई अपिल गर्छु ।